ऋचा शर्मा कस्को प्रेममा छिन ? - Lokpath Lokpath
२०७६, १५ श्रावण बुधबार १०:०१
ऋचा शर्मा कस्को प्रेममा छिन ?
प्रकाशित मिति : २०७६, १५ श्रावण बुधबार १०:०१
काठमाडौं । फिल्म उद्योगमा ऋचा शर्मालाई ‘सिरियस’ कलाकारका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । तर, ऋचा यो कुरा स्वीकार गर्नुहुन्न । ‘म अभिनय गर्छु, यो मेरो जागिर हो,’ उहाँले थप्नुभयो, ‘मानिसले आफ्नो जागिर सकेसम्म उत्कृष्ट रुपमा गर्नुपर्छ । मैले हरेक प्रोजेक्टमा सकेसम्म राम्रो गर्ने प्रयास मात्रै गरेकी हुँ ।’
ऋचाले दर्जनौं चलचित्रमा काम गर्नुभएको छ । त्यसमध्ये केही उत्कृष्ट फिल्ममा दरिएको छ । उहाँका केही फिल्म असफल पनि छन् । यद्यपी उहाँले काम गरेका हरेक फिल्मको अभिनयलाई दर्शकले रुचाएका छन् । उहाँसँग रामजी ज्ञवालीले यो साता ‘पुरुषवार्ता’ गर्नुभएको थियो ।
बिहे गर्ने बेला नभएको कि भनेजस्तो पुरुष पाइएन ?
बेला हुँदैछ । समय आएपछि अवश्य होला नि ।
जीवनमा पहिलोपटक पुरुष भनेर याद गर्नुभएको व्यक्ति ?
मेरो बुबा नै हो । तर, अहिले उहाँ हुनुहुन्न ।
विशेष प्रभाव पारेको पुरुष ?
बुबा नै हो । जीवनमा धेरै सफल भएपनि सामान्य किसिमले जीवन बिताउन खोज्ने । जतिसुकै धनी भएपनि देखावटी गर्न नहुने बुबाबाट सिकेकी हुँ । अरु धेरै कुरा सिकेकी छु ।
सबैभन्दा सहयोगी पुरुष ?
जीवनमा सहयोगी पुरुष धेरै भेटेकी छु । तर, विशाल भण्डारी बढी नै सहयोगी लाग्छ । ऊ हुँदा हरेक कुरा बिर्सिन्छु ।
सबैभन्दा धेरै माया लाग्ने पुरुष ?
मेरो दिदीको छोरा । ऊ हाम्रो घरको कान्छो पुरुष सदस्य पनि हो ।
सबैभन्दा घृणा लाग्ने पुरुष ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प हो । मलाई अनुहार हेर्न पनि मन पर्दैन ।
सबैभन्दा झर्को लाग्ने पुरुष ?
२–३ जना पुरुष छन्, उनीहरुको नाम नलिउँ होला ।
सपनामा आउने पुरुष ?
अहिलेसम्म कति पुरुष सपनामा आए भन्ने यादै छैन । तर, शाहिद कपुर, आमिताभ बच्चन, पारश खड्का बढी सपनामा आउने गरेका छन् ।
कल्पनामा आइरहने पुरुष ?
पुरुषहरुको कल्पना गरेर बस्ने बानी छैन ।
पहिलोपटक डेट गएको व्यक्ति ?
नाम त भन्न सक्दिनँ । अत्ति हुन्छ । ११ कक्षा पढ्दा डेट गएको याद छ ।
प्रेममा धोका दिएको पहिलो पुरुष ?
पहिलोपटकको प्रेममा मैले धोका दिएकी हुँ । नाम भन्ने हो भने बर्बाद हुन्छ ।
पहिलो पटक लभलेटर दिएको व्यक्ति ?
हामीसँगै पढ्ने साथी (सिद्धान्त) ले हो । उसले बिर्सियो कि ? तर, मैले सम्झिरहेकी छु ।
हात काटेर लभलेटर पठाउने कोही थिए ?
११–१२ पढ्दा एकजनाले त्यसरी रगतले लेटर लेखेका थिए । यो कुरा म कहिल्यै बिर्सिन्न ।
बिहेको प्रस्ताव गर्ने पहिलो पुरुष ?
एकजना अस्ट्रेलियाको युवकले ‘वील यू म्यारी मी’ भनेर प्रस्ताव गरेका थिए ।
पहिलो किस गरेको पुरुष ?
हाहा…। नाम भन्न सक्दिनँ । तर, धेरै वर्ष अघिको कुरा हो ।
बिहे गर्न मन लागेको व्यक्ति ?
जस्तो मान्छेसँग बिहे गर्न मन थियो, त्यस्तै मान्छेसँग चाँडै बिहे हुनेवाला छ । १–२ महिनामा तपाईंले मेरो प्रेमीको बारेमा थाहा पाउनुहुनेछ ।
संसारमा सबैभन्दा हृयाण्डसम लाग्ने पुरुष ?
हलिउड अभिनेता लियोनार्दो डिक्याप्रियो ।
सबैभन्दा मनपर्ने अभिनेता ?
विपीन कार्की । ऊ सँग काम गर्ने इक्षा छ ।
निरन्तर संवाद भइरहने पुरुष ?
खासै कोही छैन । म कमै मात्रामा पुरुषहरुसँग बोल्छु ।
सबैभन्दा मनपर्ने पुरुष नेता ?
राम्रो ड्रेससेन्स भएको पुरुष ?
अनुप विक्रम शाही ।
गतिलो सेन्स अफ हृयुमर भएको पुरुष ?
म अहिले जोसँग डेट गरिरहेको छु ।
तपाईंको हातको झापड खाएको पुरुष ?
१० वर्ष अघि होला सायद, एक जनालाई राम्रैसँग चड्कन हानेकी थिएँ ।
तपाईंलाई धम्की दिने पुरुष कोही छ ?
एकजना थियो । केही वर्ष अघि तिमी मलाई भेट्न आएनौ भने यसो उसो गर्छु भन्दै धेरै धम्की दिएको थियो । अत्ति भएपछि मैले प्रहरीमा उजुरी दिएँ । प्रहरीले ठीक पारेपछि उसले कहिल्यै सम्पर्क गरेन । रमाइलो कुरा त ऊ मभन्दा धेरै कान्छो रहेछ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
तस्विर : ऋचाको फेसबुकबाट
उद्धारका लागि ४२ उडान थपियो
कोभिड–१९ का कारण विदेशमा रहेका नेपाली नागरिको उद्धारको समय सीमा सरकारले थप गरेको
सरकारले निर्णय गरेपनि खुलेन यातायात
काठमाडौं । छोटो दुरीका सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नेबारेको अन्योल अझै हटेको छैन ।
काठमाडौं । अख्तियारले गैरनेपाली नागरिकलाई नक्कली जग्गाधनी बनाएर जग्गा बेचबिखन गर्ने सहयोग गरेको
काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपामा चुलिएको संकट तत्काललाई समाधान भएको छ । नेकपाको
काठमाडौं उपत्यकामा भोलिदेखि सुन्दर यातायात सञ्चालन हुने